सुतेकै ठाउँमा सर्पले टोकेपछि दिदी बहिनीको ज्यान गयाे - Nepali Mato
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार ११:०८ August 9, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on सुतेकै ठाउँमा सर्पले टोकेपछि दिदी बहिनीको ज्यान गयाे
दाङमा सर्पदंशबाट एकै घरका दुई दिदी बहिनीको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका वडा नं ७ भौवा नाका निवासी १० वर्षीया सुजु सार्की र उनकी १३ वर्षिया दिदी कस्मिरा सार्कीको सर्प दंशबाट मृत्यु भएको हो ।
स्थानीय शिवशक्ति माध्यामिक विद्यालयमा मृतक दिदीबहिनी कक्षा ७ र कक्षा ५ मा अध्यनरत थिए । दिदीबहिनीलाई बिहान ४/५ बजे सुतेकै ठाउँमा सर्पले टोकेको थियो । भारतसंग सीमाना जोडिएको विकट क्षेत्र भौवा नाकाबाट उनीहरुलाई उपचारको लागि सुरुमा भारतको शिरशियास्थित अस्पतालमा लगिएको थियो ।
त्यहाँ उपचार संभव नभएपछि उनीहरुलाई थप उपचारका लागि बहराईच लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै उनीहरुको मृत्यु भएको हो । विकट क्षेत्र भएको हुँदा त्यहाँबाट लमहीस्थित अस्पताल सम्म आउन झन्डै ६/७ घन्टा लाग्ने गर्छ भने भारत तर्फ जाँदा दुई तीन घन्टामा पुग्न सकिने हुँदा उपचारका लागि भारततर्फ लगिएको थियो ।
स्वास्थ्य, यातायात, संचार लगायतको सुविधावाट बञ्चित भौवा नाका क्षेत्र जंगल क्षेत्र हो । एकाबिहानै दुबै दिदी बहिनीलाई सर्पले डसेपनि सुरुमा बिहानभर झारफुकको प्रयास गरेर ढिलागरी अस्पताल लैजाने गल्तीले गर्दा दुबै दिदी बहिनीको मृत्यु भएको हो ।
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार ११:२४ May 7, 2019 Nepali Mato
हाम्रो सलाम छ पुर्खौली घरलाई धर्मसाला बनाउँदै महानिरीक्षक खनाल, १५ सदस्यीय समिति गठन
३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०६:२८ June 15, 2019 Nepali Mato
जे बर मागे पनि पुग्ने ! दर्शनको लागी पुग्नै पर्ने शिवको मन्दिर हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
५ श्रावण २०७६, आईतवार ११:०५ July 21, 2019 Nepali Mato
ट्राफिकले घुस खाए भन्दै ‘पिडित’ हाम्रो अफिसमा , पोखरामा इन्जोय जोनको बास्तबिकता के हो ? मन्त्री संग सिधा सवाल (भिडियो सहीत)
२८ बैशाख २०७६, शनिबार १३:०८ May 11, 2019 Nepali Mato
१० भाद्र २०७६, मंगलवार १७:०२ August 27, 2019 Nepali Mato